September 30, 2018 Spnews Comments Off on रोनाल्डोमाथि बलात्कारको आरोप, गुपचुप राख्न रानाल्डोले तिरे ४ लाख डलर !
एजेन्सी : पोर्चुगल फुटवल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व चर्चित हुनुको साथै पाँच पटक सम्मका प्लेयर अफ द इएर हुन सफल खेलाडी हुन् । यतीखेर तिनै खेलाडीलाई अमेरिकी महिला बलात्कारको आरोप लागेको छ । अमेरिकी एक […]
८० वर्षीय बृद्धले बिरामी पत्नीलाई ठेलामा अस्पताल ल्याए, हेर्न सबै आए सहयोग गर्न कोही आएनन्
September 30, 2018 Spnews Comments Off on ८० वर्षीय बृद्धले बिरामी पत्नीलाई ठेलामा अस्पताल ल्याए, हेर्न सबै आए सहयोग गर्न कोही आएनन्
एजेन्सी । भारतको मध्य प्रदेशको गुना भन्ने ठाउँमा हृदय विधारक दृश्य देखा परेको छ। जहाँ लक्षमण नाम गरेका ती ८० वर्षीय बृद्धले आफ्नी बिरामी पत्नीको उपचारका लागि ठेला गाडामा राखेर घचेट्दै अस्पताल पुर्याएका छन्। पत्नीको […]
बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सले रक्सीका कार्टुन बोक्दै, किन गर्छन यति धेरै लापरबाही ?
September 30, 2018 Spnews Comments Off on बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सले रक्सीका कार्टुन बोक्दै, किन गर्छन यति धेरै लापरबाही ?
काठमाडौँ । आपत्कालीन सेवामा खटिनुपर्ने एम्बुलेन्सको परिभाषित काम र जिम्मेवारी नै हो । तर बेला बेलामा एम्बुलेन्सको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ । एम्बुलेन्सबाट गाँजा तस्करी, अस्पतालका कर्मचारी बोकेको, वनभोजमा प्रयोग गरेको, युवायुवती हिउँ खेल्न जाँदा […]
September 30, 2018 Spnews Comments Off on मोडल लक्ष्मी आचार्यको अश्लील तस्बिर छापेको भन्दै पोखरामा शुक्रबार साप्ताहिक जलाइयो
नेपालमा दिन प्रतिदिन महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेकै बेला आमसञ्चार माध्यमले हिंसा नियन्त्रण गर्नुको साटो अश्लीलता झल्काउने साम्रगी प्रकाशन गरेको भन्दै शनिबार पोखरामा विद्यार्थी संगठनले नागरिक राष्ट्रिय दैनिकको साप्ताहिक परिशिष्टांक शुक्रबार साप्ताहिक जलाएका छन् । अखिल […]
September 29, 2018 Spnews Comments Off on हलमै सासुबुहारीको रमिता: एउटा रुने अर्को आँसु पुस्ने (भिडियो)
फ्राइडे रिलिजको परम्परा धान्दै शुक्रबारबाट ३ नयाँ नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आए । ति हुन् – ‘कथा काठमाडौँ’, ‘अनुराग’, ‘छिरिङ’ । यी सबै चलचित्र देशभर एकसाथ प्रदर्शनमा आएका हुन् । यद्यपी देशभरका चलचित्र भवन यी ३ […]
ओली सरकारको सात महिना: जनतामा आशा भन्दा निराशा धेरै, आफ्नैबाट आलोचना
September 29, 2018 Spnews Comments Off on ओली सरकारको सात महिना: जनतामा आशा भन्दा निराशा धेरै, आफ्नैबाट आलोचना
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुईतिहाई बहुमत सरकार आफ्नैबाट आलोचित हुन थालेको छ । सरकारको सात महिनामा वागमतीमा धेरै पानी बगे । यो अवधिमा प्रतिपक्षको मात्र होइन, आफ्नैको आलोचनाले असफलतालाई उजागर गर्न थालेको छ […]
यी राशि बिचको प्रेम र विवाह कहिल्यै सफल हुँदैन, कतै तपाई त पर्नु भएन ?
September 29, 2018 Spnews Comments Off on यी राशि बिचको प्रेम र विवाह कहिल्यै सफल हुँदैन, कतै तपाई त पर्नु भएन ?
प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र खुबी हुन्छन् । यसै आधारमा केही राशि जो एक–अर्काको शत्रु मानिएको छ, त्यस्तै केही राशिहरुमा सम्बन्धमा निक्कै लगाव रहने हुन्छ । राशिमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने […]
३९ वटी श्रीमतिको एउटै श्रीमान: खाना खर्च मात्रै डेढ लाख, परिवारिक सदस्य सुन्दा अच्चम पर्नुहुनेछ
September 29, 2018 Spnews Comments Off on ३९ वटी श्रीमतिको एउटै श्रीमान: खाना खर्च मात्रै डेढ लाख, परिवारिक सदस्य सुन्दा अच्चम पर्नुहुनेछ
महँगीको यो जमाना । बजारमा वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको बढ्यै छ । अझ खाद्य पदार्थको त कुरै नगरे भो । त्यसको मूल्य आकाशै छुने गरी वृद्धि भएकै छ । समय–समयमा भाउ बढ्ने क्रम पनि रोकिएको […]
१४ वर्षीय किशोर स्वयम्भूबाट बेपत्ता, सक्दो शेयर गरि खोज्न मद्दत गरौ !!
September 29, 2018 Spnews Comments Off on १४ वर्षीय किशोर स्वयम्भूबाट बेपत्ता, सक्दो शेयर गरि खोज्न मद्दत गरौ !!
काठमाडौं । काठमाडौंको स्वयम्भुबाटै १४ वर्षीय किशोर बेपत्ता भएका छन् । बिहीबार बिहान मर्निङवाक हिँडेका काठमाडौं महानगरपालिका–१५ डल्लु बस्दै आएका देवराज लामा बेपत्ता भएका हुन् । नुवाकोट स्थायी घर भएका लामा त्रिरत्न आवसीय मावि, भ्यूखेल काठमाडौं […]